प्रदेश ३ का सबै जिल्लामा कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा
प्रदेश ३ का सबै जिल्लामा कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका १३ जिल्लामा पकेट क्षेत्र तथा तथा ब्लक घोषणा गरेर त्यसका लागि करिब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले नयाँ र पुराना गरी ४ सय ९५ वटा पकेट क्षेत्र र ५६ वटा ब्लकलाई चालु आर्थिक वर्षमा ६६ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभभएको छ ।
पुराना पकेट क्षेत्रका लागि ११ करोड ८७ लाख छुट्याइएको छ भने नयाँ पकेट क्षेत्रका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सचिव कार्कीले बताउनुभएको छ । नयाँ ब्लकका लागि चालु अनुदानतर्फ १५ करोड र पुराना ब्लकका लागि ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ चालु अनुदान छुट्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. शरणकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ ।
गत आवमा मन्त्रालयले पकेट तथा ब्लकका लागि २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । चालु आवका लागि विभिन्न जिल्लाबाट विशेष गरी तरकारी र फलफूलको पकेट तथा ब्लक स्थापनाका लागि माग आएको बताइएको छ ।
विभिन्न कृषि उपजको पकेट क्षेत्र माग गरिए पनि मकवानपुरमा तरकारी, आलु, मकैको पकेट क्षेत्र स्थापना गरिनेछ भने चितवनमा तरकारी, मौरी, केरा र धानको पकेट क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । धादिङमा तरकारी, आलु र मकैका पकेट क्षेत्र रहनेछन् भने नुवाकोटमा पनि सोही बालीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
रसुवा, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौंमा तरकारी र आलुको पकेट तथा ब्लक क्षेत्र घोषणा गरिने मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख पाण्डेले बताउनुभएको छ । काभ्रेमा तरकारी आलुका साथै अलैंची र कफीको पनि पकेट क्षेत्र हुनेछन् भने सिन्धुपाल्चोकमा तरकारी, आलुका साथै मकै र किबीको पकेट तथा ब्लक स्थापना गरिनेछ ।
पाण्डेका अनुसार दोलखामा किबी, तरकारी, आलु र सुन्तलाको पकेट क्षेत्र बनाइनेछ भने आलु र तरकारीका साथै जुनारको पकेट र ब्लक घोषणा गरिनेछ । सिन्धुलीमा अदुवा र बेसार, जुनार, मकैको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नुवाकोटसंग सिमाना जोडिएको काठमाडौंको केहि स्थान “सिल” कतै अनुमतिविना प्रवेश निषेध
लकडाउनको ६१ औ दिनमा कोरोना संक्रमित ६०३ पुग्यो, नुवाकोटमा एक जनामा संक्रमण पुष्टि